Mareykanka oo ka hadley duqeyn ay ka fuliyeen koonfurta Somalia Warbixin+Sawiro – SBC
Mareykanka oo ka hadley duqeyn ay ka fuliyeen koonfurta Somalia Warbixin+Sawiro
Dawlada Mareykanka ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisey weerar xaga cirka ah oo dhawaan diyaarado dagaal ka geysteen gobolka Jubada Hoose, iyadoo weeraradaasi duqeynta ah ay sheegatey inay ka dambeyso xukuumada Mareykanka.
Sarkaal sare oo ka tirsan dawlada Mareykanka oo codsadey inaan magaciisa la xusin sababo xasaasiyada warkani leeyahay ayaa u sheegay wargeyska Washington Post in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uu ahaa xoogaga Shabaabka oo Mareykanku xiligan u arkaan qatar soo kordhaysa oo sii uu xoogeysanayo xiriirka ay la leeyihiin waa sida hadalka loo yiriye xoogaga Aragagixisada caalamiga ah.
“Iyagu (Al-Shabaab, waxay hada la soo baxayayaan wax uun dhiiranaan ah, waxaynuna xooga saari inaan toos u abaarno oo aan wiiqno dhaqdhaqaaqooda, waxay xitaa qorsheynayaan inay weeraro ka baxsan gudaha Soomaaliya dibadda ka geystaan” ayuu hadalkiisa sii raaciyey sarkaalkaasi.
Taliska Mareykanka sarkaalkan ka tirsan wuxuu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid ay fulisey diyaarad dagaal oo ah kuwa waxduqeeya taasi oo ah diyaaradaha is haga ee bilaa duuliyaha ah.
Weerarkaasi ayaa lagu sheegay inay ku dhaawacmeen laba sarkaal oo ka tirsan Al-Shabaab, waxaana la sheegay in weerarku uu ahaa mid toos loogu beegsanayey labadaasi sarkaal oo si toos ah xiriir ula leh Anwar Al-Awlaqi oo nin u dhashay Mareykanka kaasi oo la rumaysan yahay in uu ku dhexdhuumanayo qoyskiisa oo asalkoodu yahay Yemen.
Mareykanku waxay ka fuliyeen Soomaaliya hawlgalo weerar oo dhanka cirka ah, kuwaasi oo la sheegay in lagu bartilmaameysanayey maleeshiyaadka Al-Qaacida ee la rumaysan yahay inay ku dhuumayleysanayaan gudaha Soomaaliya, laakiin weerarkii todobaadkii hore dhacay ee duqeynta xaga cirka wuxuu ahaa kii ugu horeeyey ee loo adeegsadey diyaaradaha aan laheyn duuliyaha loo yaqaan drone strike sida ay sheegayso Washington Post.
Khamiistii la soo dhaafay Al-Shabaab waxay sheegeen in qarax xoogan uu ka dhacay agagaaraha magaalada Kismaayo, qaraxaasi waxay sheegeen in uu dhacay ka dib markii la maqley guuxa diyaarad.
Shabaab oo ka hadley weerarkaasi
Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa sheegay in rag iyaga ka tirsan ay soo sheegeen duqeyn xaga cirka ah oo lagu eegtey saldhig ciidan oo ay leeyihiin Al Shabaab, isla markaana duqeyntaasi ay ku dhaawacmeen dagaalyahano ka tirsan kooxdooda kuwaasi oo ay ka mid yihiin ajaaniib, weerarkaasi ayaa la rumaysan yahay in ay fulisay diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay.
Bishii January sanakdii 2007 duqeyn xaga cirka ah oo ay Mareykanku fuliyeen waxay ku duleen daraasiin dad ah deegaanka Ras Kamboni ee Koonfurta Soomaaliya, weerarkaasi ayaa la sheegay in uu ahaa bartilmaameedkiisu hogaamiyihii Al-Qaacidada Bariga Afrika Fasul Cabdalla Maxamed oo horaantii bishan lagu diley weerar ka dhacay bar koontarool oo ku taal magaalada Muqdisho, ka dib markii uu si qalad ah ugu soo dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidamada DKMG.
Fasul Cabdalla waxaa la rumaysnaa in uu ka dambeeyey weeraradii 1998-kii lagu ekeeyey safaaradaha Mareykanka eee magaalooyinka Nairobi & Dar es Salaam, weeraradaasi oo ahaa kii ugu xumaa ee ay Al-Qaacidu ku fuliso danaha Mareykanka tan iyo intii ka horeysay weeraradii 2001-dii ee lagu bartilmaameystey magaalooyinka Washingtonm & New York.
Al-Shabaab oo qorsheynaysa weeraro ka baxsan gudaha Soomaliya
Leon Panetta, madaxa CIA-da Mareykanka ee haatan shaqada ka tagaya isla markaana badalaya xoghayaha Gaashandhiga Mareykanka ee xiligan Ropert Gates ayaa horaantii bishan wuxuu ka shanqariyey in Al-Shabaab ay raadinayaan sidii ay balaarin lahaayeen weeraradooda, isla markaana ay u qaadi lahaayeen weeraro ka baxsan gudaha Soomaaliya oo ay ka geystaan dibadda Soomaaliya.
Al-Shabaab waxay si buuxda gacanta ugu hayaan badi gobolada Bartamaha & Koonfurta Soomaaliya waxay sidoo kale maamulaan kala bar magaalada caasimada ah ee Muqdisho, inkastoo dagaaladii ugu dambeeyey ee ay ciidamada AMISOM ee ku sugan Muqdisho kaga qabsadeen Shabaabka qaybo muhiim ah oo ka tirsan caasiamda.